Waaxda Tirakoobka dadweynaha Kenya oo la faray arin ay ku farx... | Universal Somali TV
Maxkamada magaalada caasimada ah ee Nairobi ayaa soo saartay amar la xiriira in dib u eegis lagu sameeyo tirakoobkii dadweyne ee laga qabtay bishii sideedaad ee sanadkii hore deegaanada dhaca gobolka waqooyiga bari ee Kenya oo muran uu ka Dhashay.
Mudanayaal uu hogaaminayo madaxii hore ee golaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya Mr Aadan Barre Ducaale ayaa ka horyimid natiijada tirakoobka kadib markii ay soo baxday tiro aad u yar oo ah inta laga filayay cadada Soomaalida degta waqooyiga Kenya.
Garsoorayaasha Maxkamada Nairobi oo wali amarkaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqin ayaa faray waaxda tirakoobka dadweynaha ee Kenya in ay u ogoladaan mudanayaasha baarlamaanka ee gobolka waqooyi bari iyo xeeldheerayaasha la socda ee bartay cilmiga IT in laga qanciyo qaabka uu u dhacay tirakoobka hadii qaladaad jirana la Saxo.
Arintaan ayaa waxaa Universal u xaqiijiyay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Garissa laga soo doorto oo diiday in magaciisa aan baahino sababo la xiriira go,aankan oo wali si rasmi ah aysan u helin warbaahinta gudaha Kenya.
Sanadkii 2010-kii ayaa tirakoobkii dadweyne ee laga sameeyay gobolka waqooyi bari waxay soomaalida noqotay cadadooda laba malyan iyo bar, balse arinta layaabka leh ayaa noqotay 10 sano kadib in tiradii aysan isbadalin taasi oo la macno ah in uusan Isbadal ku imaan tirakoobka, waxaana natiijadii sanadkii hore ay layaab ku noqotay Soomaalida Kenya.
Kan-xigaXubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ...
Kan-horeXisbiga Wadajir oo Baaq u diray Guddi...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ku soo laabtay Muqdisho
Madaxweyne Guudlaaw oo la kulmay Wakiilka Midowga Yurub
57,071,487 unique visits